Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/masaka.mg.aj
Proverbe Ny mangotraka naman’ ny masaka; ny tsara antoka naman’ ny lasa. [Cousins 1885 #2327]
Proverbe Safosehaky ny amonta-manta, ka tsy misy hasiana ny masaka. [Veyrières 1913 #4582, Rinara 1974 #3774, Cousins 1885 #2820]
Proverbe Telo no adidin’ ny takotra: ny mandrako-poana adidiny; ny mandrako-masaka adidiny; ny mandao masaka adidiny. [Cousins 1885 #3066]